Abavelisi be10G XFP | China 10G XFP Umzi mveliso kunye nabaxhasi
10G XFP BIDI Imodyuli eyiNtloko
HUANET 'S I-HUA-XP1596-ZR, L Ifomathi eNcinci ye-10Gb / s (XFP) i-transceivers ehambelana nemigaqo yangoku ye-XFP ye-Multi-Source Agreement (MSA). Ziyi-transceiver eyi-multi-protocol ehambelana ne-100km SONET OC-192 kunye ne-SDH STM-64 nge-ITU-T G. Amanqanaba edatha ehambelana ne-ITU-T G.709 FEC (OTN). Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka ngocingo lwe-2-wire serial interface, njengoko kuchaziwe kwi-XFP MSA.
10G XFP CWDM Imodyuli ebonakalayo
HUANET IHUAXCxx1XL-CDH1 Ngaba iTransceiver ibonisa uzinzo olugqwesileyo lobungakanani bamaxabiso, imodyuli esebenzayo yexabiso. Yenzelwe i-10G CWDM SDH, 10GBASE-ZR / ZW kunye ne-10G yeFiber- Channel application. I-transceiver inamacandelo amabini: Icandelo lokuhambisa libandakanya i-laser ye-EML epholileyo. Kwaye icandelo lokwamkela liqukethe i-APD photodiode edityaniswe ne-TIA. Zonke iimodyuli ziyanelisa iimfuno zokukhusela i-laser yeklasi. I-CWDM XFP i-transceiver ibonelela ngesinxibelelanisi esweni esomeleleyo, esivumela ukufikelela kwexesha lokwenyani kwiiparamitha zokusebenza ezinje ngobushushu be-transceiver, i-laser bias yangoku, amandla e-transmitter efumanekayo, amandla e-optical kunye nombane we-transceiver voltage.
Imodyuli ye-10G ye-XFP yeFiber Optical
Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, I-Sfp C ++, Ixabiso leHuawei Olt, Umthumeli weXfp, IHuawei Qsfp +,